ပန်းကန်လုံးတစ်ချပ်အတွင်းမှ ကမ္ဘာ - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
မကြာမီက ရိုက်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင် ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အတွက် ပန်းကန်လုံးတစ်ချပ်ကို ကိုင်ထားတာ လဲ။ အမှန်အားဖြင့် ထိုခွက်သည် အခြားပန်ကန်လုံးများထက် ပိုကြီးပါသည်။ ဒါက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ ပန်းကန်လုံးသည် အရာများစွာတို့အတွက် တင်စားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။
1. ဦးစွာပထမအနေဖြင့် သင်တို့အားလုံးတွင် တစ်စုံတစ်ရာနှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို လက်ခံရန် အဆင့်မီ နှလုံးသားတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
2. ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကလေးများ၊ မေးငယ်များနှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်အားလုံး စားနပ် ရိက္ခာ လုံလောက် ဖူလုံကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် မျှော်လင့်ပါသည်။
3. အနှစ်သာရ မြင့်မားသည့် ဓမ္မတရားကျင့်ကြံပွားများသူ တစ်ဦးတွင် ကြေးမုံကဲ့သို့ ကြည်လင်သန့်ရှင်းသည့် တရားဓမ္ဓကိန်းအောင်းပါမည်။ ဤအရာကို လက်ရှိတွင် နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း အချိန်ရောက်လာ သည့်အခါ နားလည်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျင့်ကြံအားထုတ်သူများစွာတို့သည် ဤရေပန်းကန်လုံး ထဲတွင် အခြားကမ္ဘာကို ကြည့်နိုင်မည်ဟု ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ ဤအရာသည် ရှုမြင်မှု အထူး နည်းလမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ရေထဲတွင်၊ ရေပန်းကန်ထဲတွင် ၎င်းတို့သည် အံဖွယ် ဖြစ်ရပ်များမြင်တွေ့နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ဤအရာ သည် ကွန်ဖူး ဖြစ်ပါသည်( အချိန်နှင့် သက်ရောက်ချိန်)။
4. လူ၊ နတ်၊ သတ္တဝါ ဝနေယျအပေါင်းတို့သည် ငတ်မွတ်မှုဘေးမှ ကင်းဝေးပါစေ။ ထို့နောက် ဤကမ္ဘာကြီး သည် ငြိမ်းချမ်းလာပါမည်။
5. ချမ်းသာသုခနှင့် မြင့်မြတ်မှု ရယူလိုသူအားလုံးတို့တွင် ကောင်းကျိုးအလိုဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေ။ ဤအရာသည် လှပသည့် ပန်းပုံစံဖော် ပန်းကန်လုံး တစ်ချပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းပုံစံဖြင့်ဖော်ထားသည့် ပန်းကန်တစ်လုံးကို တမင် ရွေးထားပါသည်။
6. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝများသည် အကျိုးမဲ့ကာလတွင် တစ်နေ့တာ ရှင်သန်ရခြင်းမရှိစေဘဲ လှပစွာ ပွင့်လန်းကြ ပါစေ။ ဤအရာများသည် ယခုပန်းကန်လုံး၏ အဓိပ္ပါယ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုအားလုံးရှိစေရန် ကျွန်ုပ် ဆန္ဒပြုပါသည်။
7. ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လောကီလူသားအားလုံးတို့သည် အရောင်အသွေး ကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးဖြင့် ဘဝတစ်ခုကို ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေသား!